राशिफल महादेबलाई देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी भेटी स्वरुप Share गर्दै, भदौ २२ गते सोमबारको राशीफल हेर्नुहोस् ।
महादेबलाई देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी भेटी स्वरुप Share गर्दै, भदौ २२ गते सोमबारको राशीफल हेर्नुहोस् । आजको पन्चाङ्ग:-
हेर्नुहोस् तपाईकाे राशिफल:-
समुदायको हितमा लोकप्रिय काम गर्न सकिनेछ। नोकरी र व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुने समय छ। छोटो समयमा पुरुषार्थी काम सम्पादन हुनेछ। प्रयत्न गर्दा दिगो कामको जग बसाउन पनि सफल भइनेछ। अवसरहरुको सदुपयोग गर्न सकिने तथा भविश्यको लागि फाईदा हुने काम गर्ने बाताबरण बनाउन सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक भई आफ्ना भावना साटासाट गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानि हुनेछ । बुवा आमा तथा अग्रजहरुबाट सहयोग पाईने हुदा मन प्रफुल्लित हुनेछ । थोरै समयको प्रयत्ने सहजै गन्तब्य तथा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ । प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। नाम, दाम र इनाम कमाउने बेला छ। पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना छ।
हल्लाको पछि लाग्दा दु:ख पाइनेछ। सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई भाग्यले साथ दिनेछ। धेरै आम्दानी नभए पनि व्यवसाय सामान्य रूपमा चल्नेछ। शुभचिन्तकहरूले आफ्ना कमजोरीप्रति गुनासो गर्न सक्छन्। प्रभावशालि ब्याक्तिहरु सँग भेट हुनेछ भने नयाँ योजनाको रुपरेखा कोरेर फाईदा हुँने काम अगाडि बढाउन सकिनेछ । मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा बृद्धि भएर जानेछ । लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने तथा आफन्त बाट सहयोग पाईनेछ । अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरि अरुलाई देखाउन सकिनेछ । धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा दिन बित्नेछ । परिस्थितिवश आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। अस्वस्थताले काममा जुट्न बाधा पर्नेछ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल बढ्न सक्छ।
हुलमुलमा धनमाल जोगाउन अलि सजग रहनुपर्ला। स्वास्थ्यका लागि आराम र खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। यात्राको प्रक्रियामा बढी खर्च हुन सक्छ। आफ्नो उपलब्धिमा अरूले दाबी गर्ने सम्भावना रहेकाले गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। माया प्रेममा एक अर्कालाई बिश्वास गर्न सकेमात्र दिन रमाईलो हुनेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला । सानो गल्ति गर्नाले ठुलो घाटा सहनु पर्नेछ भने नियम संगत काम नगर्दा दण्ड तिुर्नपर्ने हुन सक्छ । खानपिनमा ध्यान नदिदा स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्छ । अरुतिरै ध्यान जादा वा अध्ययन अध्यापनमा समय दिन नसक्दा प्रतिष्पर्धिहरुभन्दा पछि परिनेछ । व्यस्तता बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। दौडधुप गर्नुपरे पनि काम अधुरो रहला। गोप्य सूचना बाहिरिन सक्छ।
प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ। पहिलेका सम्झौता तोड्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तर अरूको भरले मात्र काम नबन्न सक्छ। उधारोमा व्यापार गर्नुपर्ला। चुनौती पन्छाउँदै रोकिएका काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। केही विवादास्पद जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ला। माया प्रेममा एक अर्कालाई अबिश्वास बढ्ने तथा जीवन साथि सँग साना साना कुरामा राय बाजिनेछ । आए आर्जनका बाटाहरु साघुरा हुनेछन् भने व्यापार व्यावसायमा मन्दि आउनेछ । व्यावसायिक यात्रा हुने भएपनि यात्राका क्रममा बिभिन्न बाधा तथा अवरोधहरुको सामना गर्नुपर्नेछ । बिलाशि तथा भौतिक सम्पति प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नहोला नराम्रा घट्नाहरु घट्न सक्छ । खानपानमा ध्यान नदिए स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउन सक्छ । व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने समय छ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। खर्च लागे पनि दिगो काम फेला पर्नेछ।
तपाईको वरिपरि भएका प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ भने बिवादित बिषयहरुको निर्णय तपाईकै पक्षमा आउँनेछ । स्वास्थ्य सबल बन्नुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ। चुनौती पन्छाएर पनि काम बनाउन सकिनेछ। शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् भने प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। व्यापारलगायत अर्थ लाभ हुने योजना प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। दिगो काम थालनी हुनेछ। पछिका लागि पनि सकारात्मक संकेत प्राप्त हुनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनमा थोरै समय दिदा पनि राम्रो नतिजा हात लाग्ने हुँदा आफन्त तथा गुरुवर्गहरुबाट थप हौसला प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा सदाभन्दा आम्दानि बढिनै हुनेछ भने माया प्रेमको गाठो कसिलो भएर जानेछ ।
उपलब्धिका लागि परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्छ। समयतालिका नमिल्दा आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा ध्यान दिनुहोला। मिहिनेत गर्दा अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। नियमित काम र व्यवसायमा लाभ हुनेछ। माया प्रेमका कोपिलाहरु पक्रियर जानेछन् भने आत्मिय मित्र तथा आफन्तजनको सहयोगले महत्वपुर्ण कामहरु फत्ते गर्न सकिनेछ । तपाईको बौद्धिकताको उच्च मुल्याङकन हुँने तथा शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरि आम्दानिका स्रोतहरु बढाउँन सकिनेछ । महत्त्वाकांक्षा पूरा नभए पनि पहिलेको उपलब्धि जोगाउन सफल भइनेछ। आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार आउनेछ। शेयर बजार तथा सट्टाको व्यावसायबाट भनेजस्तो नाँफा कमाउँन सकिनेछ । अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुँनाले भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ ।
आमा तथा आफन्तसँग टाडिएर लामो दुरिको यात्रा गर्नु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । समयमा कामहरु सम्पन्न नहुदा मान तथा सम्मानमा ठेस लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । तत्कालको फाइदा हेर्दा परिस्थिति बिग्रन सक्छ। धेरै लाभ उठाउन नसकिए पनि समस्या सुल्झनेछन्। पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ। परिवारमा आमाको माध्यमबाट काम बनाउन सकिनेछ। टाढिएका आफन्त नजिकिनेछन्। अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि मान्यजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा अवश्यै लाभ हुनेछ। माया प्रेम तथा प्रणय सम्बन्धमा चिसोपनाको बिकाश हुनेछ ध्यान दिनुहोला । खानपान तथा मौषमको ख्याल गर्र्नुहोला छाति सम्बन्धि समस्या नआउँला भन्न सकिन्न ।
सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। काम गर्ने शैलि परिवर्तन गरि आम्दानिका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । अदालति तथा न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् भने पुराना बिवादहरु साम्य गर्न सकने समय रहेकोछ । पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सफल भइनेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। गरिएका कर्मको छोटो समयमै उचित प्रतिफल पाइनेछ। स्रोत-साधन जुट्नाले उद्योग र व्यापारमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुनेछ। मिहिनेतले दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। दाजुभाई तथा छिमेकिको सहयोगले परिणाममुखि काम गर्न सकिने समय रहेकोछ । तपाईले शुरु गरेको काममा सबैको सहयोग तथा समर्थन रहनेछ । माया प्रेममा एक अर्कालाई बिश्वास गर्दै गन्तब्य पहिल्याउन सकिनेछ ।
अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। व्यापार र पेसाबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। मिहिनेतले पेसागत उचाइमा पुर्याउन सक्छ। गुमेको स्थान प्राप्त हुनाले आफ्नो वर्चस्व पनि बढ्नेछ। बिशिष्ट व्याक्तिहरु सँग भेटघाट हुने अवसर जुर्नेछ भने मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । टाडाबाट खुसिको समाचार सुन्न पाईनेछ । नोकरिमा बढुवा, प्रशंसा तथा पुरस्कार पाईने योग रहेकोछ । साहित्य तथा कलाकारितामा समय खर्चिने हरुले मनग्गे आम्दानि गर्ने समय रहेकोछ भने नसोचेको ठाउबाट धन आगमन हुनेछ । अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञान र कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ।
व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने आर्थिक रुपमा सम्पन्न भई घर परिवारका ईच्छा आकांक्षा तथा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको परिपुर्ति गर्न सकिनेछ । विशेष भेटघाटले नयाँ काम गर्ने वातावरण बन्नेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। मेहनतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाट हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। व्यापार र पेसाबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ र साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। मानव निर्मित भौतिक बस्तुहरुको प्रयोग गर्न पाईने हुदा मन प्रसन्न रहनेछ । पारिवारिक माहोलमा सहभागि भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउदै अध्ययनमा चाहेजस्तो सफलता हात पार्न सकिनेछ ।
अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपरे पनि उपलब्धि हातपार्न सकिनेछ। शुभचिन्तकहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ। तर सानो कामलाई अधिक समय खर्च हुनेछ। बेसुरको निर्णयले पछिलाई समस्या पर्न सक्छ। छर–छिमेकमा असमझदारी बढ्नेछ। केही आफन्त पनि टाढा हुनेछन्। खर्च अभावले हातमा आईसकेको काम रोकिनेछ भने व्यापार व्यावसायमा मन्दि आउनाले खल्ति रित्तिनेछ । आफन्त तथा अग्रजहरु सँग सानो सानो बिषयमा बिवाद सिर्जना हुने योग रहेकोछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउने तथा खर्च बढ्ने योग रहेकोछ ख्याल गर्नुहोला । समस्या पर्दा सहयोग गर्नेहरु कमै भेटिनेछन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएजस्तो हुनेछ भने व्यापारमा समय दिन नसस्दा घाटा लाग्ने योग रहेकोछ । खर्च लागे पनि लगानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। दिगो योजनाका लागि ऋण लिने समय छ।
पढाई लेखाईमा क्षेत्रमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदै सबैको मन आफुतिर आकर्शित गर्न सकिनेछ । लामो समय देखि रोकिएर बसेका कामहरु बन्नेछन् भने आएस्रोतका नयाँ नयाँ बाटाहरु फेला पर्नेछन् । मिहिनेत गर्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। प्रतीक्षित नतिजाले पनि उत्साह जगाउनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। तारिफयोग्य कामले राम्रो उपलब्धि दिलाउनेछ। नयाँ काम गरि मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ भने समय र श्रमको उचित मुल्याङकन हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । दाजुभाईको सहयोगले राम्रा तथा परिणाममुखि कामहरु गर्न सकिनेछ । भौतिक साधन जुट्नाले प्रसन्नता मिल्नेछ। आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् भने व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ।
यि १० काम गर्नुहोस, जीवनमा कहिल्यै दुखि हुनु पर्दैन
मानिसहरू खुसि हुनका लागि अाफु सग प्रशस्त पैसा भए हुन्छ भन्ने ठान्दछन । तर खुसि हुनका लागि पैसा मात्र भएर हुदैन । यदि तपाइ सग रिस, घमन्ड, इर्ष्या छ भने तपाइ कहिल्यै पनि खुसि बन्न सक्नुहुदैन । खुसि रहदा मान्छेकाे अायु पनि बढ्दछ । त्यसैले हाम्राे जीवनमा सास फेर्न जति महत्वपुर्ण छ त्यतिनै खुसि रहन पनि महत्वपुर्ण छ । खुसि हुदा हामि स्वस्थ जीवनशैली पाउने गर्दछाै । खुसि हुनका लागि तपाइले यस्ता कुराहरूलाइ त्याग्नु एकदमै अावश्यक हुन्छ । अाउनुहाेस खुसि हुनका लागि अपनाउनु पर्ने र त्याग्नु पर्ने १० टिप्सहरूकाे बारेमा चर्चा गराै ।
१. घृणा कम गर्नुहाेस र माया बढि गर्नुहाेस:
यदि तपाइ जीवनमा खुसि बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाइले घृणा गर्ने बानीलाइ त्यागेर सबैलाइ माया गर्ने बानीकाे विकास गर्नुपर्दछ । किनकि तपाइले अरूलाइ घृणा गर्नुभयाे भने तपाइलाइ पनि घृणानै गर्नेछन र माया गर्नुभयाे भने तपाइले पनि मायानै पाउनुहुनेछ । अरूकाे माया पाउनुनै खुसिकाे कुरा हाे र यहि मायाले तपाइलाइ जीवनभरि खुसि राख्न मद्दत गर्दछ । अरूलाइ माया गर्दा अाफुले पनि माया पाउने उदेश्यलेनै तपाइलाइ जीवनमा खुसि हुनका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ । तपाइले अाफ्नाे जीवनमा एउटा सिद्दान्त सधै लिएर हिड्ने गर्नुपर्दछ, माया दियाै र माया पाउ । याे सिद्दान्तले तपाइकाे जीवनकाे हरेक माेडमा खुसि मात्र अाउनेछ ।
२. चिन्ता कम लिनुहाेस र नित्य बढि गर्नुहाेस:
मानिसहरू बढि चिन्ता लिएर अाफ्ना खुसिहरूलाइ त्यागिरहेका हुन्छन । तर यदि तपाइ खुसि हुन चाहनुहुन्छ भने एकान्त काेठामा बसेर नित्य गर्ने गर्नुहाेस, यसाे गर्नाले तपाइकाे मन हल्का हुनेछ र चिन्ता प्रति तपाइकाे ध्यान पनि हट्दै जानेछ । एउटा भनाइनै छ नि, चिन्तै चिन्ताले मानिसलाइ चिताकाे बाटाे डाेर्याउछ । हरेक कुरालाइ सकारात्मक तरिकाले साेच्ने गर्दा पनि निकै अानन्द मिल्ने गर्दछ । नित्यले मानिसकाे हरेक अङ्गमा सङ्गितकाे सुर भर्दिने गर्दछ । त्यसैले दिनकाे १/२ घण्टा नित्य गर्ने गर्नुहाेस जसले गर्दा तपाइलाइ खुसि मिल्नेछ । सानाे तिनाे कुरालाइ ठुलाे बनाएर साेच्न छाेड्दिनुहाेस र हरेक कुरालाइ सानाे बनाएर हेर्ने गर्नुहाेस र तपाइ त्याे काम सजिलै गर्न सक्षम बन्नुहुनेछ । यसले गर्दा पनि तपाइलाइ खुसि मिल्नेछ ।
३. कम लिनुहाेस र बढि दिनुहाेस:
यदि तपाइमा अारिस गर्ने बानी छ भने त्यसलाइ तुरून्त हटाउनुहास किनकि अारिस गर्ने बानीले तपाइलाइ कहिल्यै पनि खुसि हुन दिदैन । बरू तपाइ भएका कुराहरू अरू सग पनि बाड्ने गर्नुहाेस यसले तपाइलाइ खुसि हुन मद्दत गर्दछ । साेच्नुस त अाफुले जानेकाे कुरा अरूलाइ सिकाउदा कति अानन्द मिल्ने गर्छ । अाफुभित्र लिने बानिलाइ हटाएर बढि दिने बानिकाे विकास गर्नुहाेस र हेर्नुहाेस, तपाइ सामु खुसि कसरी अाउनेछन । धेरै जसाे मानिसहरू घरमा बढि पाहुना अाए भने पनि यसरी अात्तिने गर्छन कि मानाै उनिहरूकाे सर्वसाे सकिने छ । तर घरमा अाएका पाहुनालाइ खुसि बनाएर पठाउनु भयाे भने तपाइलाइ पनि कुनै न कुनै कुरामा उनिहरूले खुसी पक्कै पार्नेछन ।
४. उपभाेग कम र सिर्जना बढि गर्नुहाेस:
तपाइकाे जीवनमा अरूले बनाएका अथवा अाविश्कार गरेका कुराहरू त थुप्रै सुन्नु भएकाे हाेला । याे सुन्दा सायद तपाइलाइ निकै खुसि पनि लाग्छ हाेला तर एकपटक साेच्नुहाेस त यदि तपाइ अाफैले कुनै कुराकाे सिर्जना गर्नुभयाे भने त्यसबेला झन तपाइलाइ कति खुसि मिल्छ हाेला । सानै कुरा भए पनि सिर्जना गर्ने बानिकाे विकास गर्नुहाेस । यदि तपाइ सिर्जनशिलता बन्नुहुन्छ भने तपाइमा त्यसैमा रमाउन थाल्नुहुनेछ । उपभाेग भन्दा बढि अाफै सिर्जना गर्ने गर्नुहाेस ।
५. निराश कम हुनुहाेस र बढि मुस्कुराउनुहाेस:
यदि तपाइ निराश भएर बस्नुभएकाे छ भने करैले भए पनि मुस्कुराउने गर्नुहाेस यसले तपाइकाे निराशापनलाइ थारै भए पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ । केहि देशहरूमा त मानिसहरू भेला भएर हास्ने पनि गर्दछन । याे एक स्वस्थ तथा तन्दुरूस्त रहने याेगा पनि हाे । यस्ताे याेगा गर्नाले तपाइकाे अनुहारमा जतिबेला पनि मुस्कान रहिरहने छ । मुस्कुराउदा तपाइले अाफुलाइ मनपरेकाे मान्छेलाइ अाफुतिर अाकर्षित पनि पार्न सक्नुहुनेछ । निरास भएर अाफ्नाे समय व्यर्थैमा खेर फाल्नु भन्दा त्याे समयलाइ सहि कुरामा सदुपयाेग गर्नु भयाे भने तपाइकाे जीवन खुसिले भरिने छ ।
६. थारै बेल्नुहाेस र धेरै सुन्नुहाेस:
काेहि काेहि मान्छेहरूकाे धेरै बाेल्ने वानी हुन्छ जसले गर्दा उनिहरूलाइ अाफुले के बाेले भन्ने समेत थाहा हुदैन र पछुताउनु पर्छ । त्यहिभएर जहिल्यै पनि बाेल्दा अाफु के बाेल्दैछु भन्ने कुरामा सतर्क रहनुपर्छ । एउटा भनाइ नै छ नि, बाेल्न पाए भन्दैमा प्याच्च नबाेल्नु र बस्न पाए भन्दैमा थ्याच्च नबस्नु । बरू धेरै सुन्ने गर्ने बानीकाे विकास गर्नुहाेस । यसले गर्दा तपाइ कहिल्यै पनि दुखि बन्नु पर्दैन ।
७. थाेरै डराउनुहाेस र धेरै केसिस गर्नुहाेस:
हरेक दिन केहि नयाँ गर्ने साेच्नुहाेस । यदि तपाइ नयाँ गर्न चाहनुहुन्छ भने केहि बाधा अड्चन त अवश्य पनि अाउछन । तर ति बाधाहरूकाे नडराइ सामना गर्न सकियाे भने मात्र तपाइ अघि बड्न सक्नुहुनेछ । साेच्नुहाेस त जब तपाइ यस्ता कुराहरूकाे सामना गर्दै अघि बड्न थाल्नुहुन्छ तब तपाइलाइ कति धेरै खुशि मिल्छ हाेला । त्यसैले जे सुकै गर्दा पनि डराउनु भन्दा बढि काेसिस बढि गर्ने गर्नुहाेस । डर हाम्राे जीवनकाे सबैभन्दा कमजाेर हतियार हाे भने शाहस सबैभन्दा बलियाे हतियार हाे ।
८. थेरै नियाल्नुहाेस र धेरै स्विकार्नुहाेस:
धेरै जसाे मानिसहरू कस्ता हुन्छन भने कुनै पनि कुरालाइ गर्नु भन्दा पनि बढि त्याे कामलाइ नियाल्ने गर्दछन । तपाइले अाफ्नाे मनमा सधै एउटा कुरा चाहि राख्न जरूरि छ, कि तपाइभित्र जस्ताेसुकै समस्याकाे समाधान गर्न सक्ने क्षमता छ । यसाे गर्दा तपाइकाे इच्छाशक्ति बढ्नुका साथै तपाइभित्र रहेेकाे मनाेबलकाे पनि विकास हुन्छ । हरेक कुरालइ स्विकार्ने बानिकाे विकास गर्दा तपाइले भविष्यमा अाउने जस्ताेसुकै समस्याकाे सजिलै निराकरण गर्न सक्नुहुनेछ ।
९. थाेरै हेर्नुहाेस र बढि गर्नुहाेस:
यदि तपाइ खुसि बन्न चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि कुरालाइ कम नियाल्ने गर्नुहाेस र त्याे कुरालाइ बढि गर्ने गर्नुहाेस । यदि कुनै कामलाइ कसरी गर्ने भनेर गर्नु भन्दा बढि हेरेर मात्र बस्न थाल्नु भयाे तपाइमा झनै निराशा बढ्ने छ र तपाइकाे अात्मविश्वास पनि घट्ने छ । यसले तपाइलाइ कदापि खुसि हुन दिदैन र सधै दुखि मात्र बन्नुहुनेछ । त्यसैले सधै कुनै पनि कामलाइ हेर्नु भन्दा बढि त्याे कामलाइ गर्ने गर्नुहाेस । जाे मान्छे धेरै मेहेनत गर्ने गर्छ त्याे मान्छे कहिल्यै पनि असफल भने हुदैन ।
१०. गुनासाे कम र कदर बढि गर्नुहाेस:
खुसि बन्नका लागि तपाइले गुनासाे गर्ने बानिलाइ त्याग्नु पर्दछ । यदि तपाइ हरेक सानाे तिनाे कुरामा पनि गुनासाे गर्न थाल्नु भयाे भने तपाइकाे खुसि पनि हराउदै जान्छ । अरूकाे कामलाइ कदर गर्ने गर्नुहाेस । अरूकाे कामलाइ कदर गर्दा अाफैलाइ पनि खुसि लाग्दछ । एक सच्चा मानिसकाे व्यत्तित्व यसबाट पनि चिनिन्छ कि उसले अरूलाइ र अरूकाे कामलाइ कतिकाे कदर गर्ने गरेकाे छ । अरूकाे कदर गर्ने मान्छेलाइ साथ दिनेहरूकाे पनि कहिल्यै कमि हुदैन ।
तपाइँको पैतलामा यस्तो चिह्न त छैन ? यसो भन्छ ज्योतिष शास्त्र:
आज २०७७ भदौ ३१ गते बुधबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ ।सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
महादेबलाई देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी भेटी स्वरुप Share गर्दै, भदौ १६ गते मंगलबारको राशीफल हेर्नुहोस् ।
Nepal Online Patrika - August 30, 2020 0